Red dot ဝန်ဆောင်မှုအတွက် လိုအပ်သော အကူအညီရယူရန် Faq
FAQs on Red Dot ၏ဝန်ဆောင်မှုများ
Red Dot မှတဆင့်လှူဒါန်းလိုသူများအတွက်
e - Top Up
Red Dot ဆိုင်များကို ဘယ်မှာရှာတွေ့နိုင်ပါသလဲ?
Red dot ဆိုင်များကို မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားမှာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်
Red Dot နှင့်ဖုန်းဘယ်လိုငွေဖြည့်ရမလဲ?
-သင်နဲ့အနီးဆုံး Red Dot ဆိုင်ကိုရှာဖွေပါ။
-Red Dot၏စက်မှ ဖြတ်ပိုင်းစာရွက်တစ်ခုထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
-ထိုဖြတ်ပိုင်းပေါ်တွင်ပါသော Pin နံပါတ်ဖြင့် သင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖြည့်ပါ။
Red Dot ဆိုတာဘာလဲ?
Red dot သည် နည်းပညာဆိုင်ရာအထောက်အပံ့လုပ်ငန်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို လက်လီရောင်းချမှုနယ်ပယ်တွင် နေရာဒေသအများအပြား၌ လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ Red dot ၏ဝန်ဆောင်မှုများတွင် ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်း၊ ဘေလ်ပေးဆောင်ခြင်း၊ ကြိုတင်ငွေသွင်းထားသောကူပွန်ကဒ်များ ပါဝင်ပါသည်။
Red Dot ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုသိပါရစေ။
-ဘေလ်ပေးဆောင်ခြင်း နှင့် Red dot Pay PIN
-Red dot Rewards ဆုလက်ဆောင်များ
-Red dot ZAY အွန်လိုင်းဈေးရုံဝက်ဆိုဒ်
Red Dot ၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုရာတွင်အခက်အခဲရှိပါက ဘယ်လိုအကူအညီရနိုင်ပါလဲ?
Red dot Customer Care အဖွဲ့မှ သင့်အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းပေးရန် မနက်(၈)နာရီမှ ညနေ(၉)နာရီ
Phone: ဝ၁ ၃၇ဝဝ၅ဝ
Red Dot စက်ကိုတပ်ဆင်လိုပါက မည်သို့လုပ်သင့်ပါလဲ?
ခဲခြစ်ကဒ်အစား Red Dotဖြင့် ဘာကြောင့်ဖုန်းငွေဖြည့်သင့်ပါသလဲ?
-အခါအားလျော်စွာကျွန်တော်တို့ Red Dot မှကျင်းပသောပြိုင်ပွဲများတွင်ပါဝင်ပြီး ဆုမဲပေါင်းများစွာကို
Red Dot၏ အီးမေးလ်ကိုသိနိုင်ပါသလား?
စုံစမ်းလိုသည်များရှိပါက info@reddotnetwork.com ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Operator အားလုံးအတွက် Red Dot ဖြင့်ဖုန်းငွေဖြည့်လို့ရပါသလား?
ဟုတ်ကဲ့။ Red dot ဆိုင်တိုင်းမှာ Operator အားလုံးအတွက် ဖုန်းငွေဖြည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်းအပြင် Redlink အင်တာနက်အသုံးပြုရန်နှင့် Ytalk နိုင်ငံခြားဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမတွက်လည်း ငွေဖြည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
ဆုရယူရန် ဝင်ဖြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါ ဆိုင်မှာသွားရောက်ထုတ်ယူဖို့ အချိန်သတ်မှတ်ချက် ရှိပါသလား?
ဆုရယူရန် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှာ ဖြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ ဆိုင်မှာ သွားထုတ်ယူဖို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်၊ ရက် ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆုအကြောင်းအသေးစိတ်ကို သေချာဖတ်ပါ။